ग्याष्ट्रिकले सताएको छ ? कहिल्यै नगर्नुस यी ८ काम
शनिबार, २३ भदौ, २०७५
काठमाडौं । धैरैजसोलार्इ ग्याष्ट्रिकको समस्याले हैरान पार्ने गरेको छ । ग्याष्ट्रिककै कारण दैनिक गर्नुपर्ने काममा पनि असर परेको हुन सक्छ । ग्याष्ट्रिक यस्तो रोग हो यसले अरू विभिन्न रोग पनि निम्त्याउँछ । तसर्थ, ग्याष्ट्रिकलार्इ हेलेचेक्य्राइ गर्नु मुर्खता हुन्छ ।
ग्याष्ट्रिक हुनका कयौं कारणहरु छन् । खानपिन र जीवनशैलीमा विशेष ध्यान दिने हो भने मात्रै पनि ग्याष्ट्रिकलार्इ नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । पेटमा ग्यास उत्पन्न भएर नै ग्याष्ट्रिकको समस्या निम्तने हो । यसरी ग्यास उत्पन्न गर्ने खानेकुरा नखाने र जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने हो भने ग्याष्ट्रिकबाट पीडित बन्नु पर्दैन ।
विशेषगरी, यी ८ कामका कारण ग्याष्ट्रिक हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । त्यसैले, यस्ता ८ वटा कामबाट आफूलाई बचाउन सकेमा ग्याष्ट्रिकबाट पनि धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ ।
कम्तिमा ७ घण्टा नसुत्नाले इनडाइजेशनको समस्या देखा पर्न थाल्छ । यसबाट पेटमा ग्याँस बढ्न थाल्छ र ग्याष्ट्रिकको समस्या देखा पर्छ ।
२. खाना राम्रोसँग नचपाउनु
खाना ठीकसँग नचबाएर खादा पनि डाइजेष्ट हुन ९पच्न० समय लाग्छ । जसका कारण पेटमा एसिड ग्याँस उत्पादन हुन थाल्छ र ग्याष्ट्रिकको समस्या निम्तन्छ ।
एक्ससाइज, हिडडुल नगर्दा पनि मेटाबोलिज्म स्लो हुन्छ । जसका कारण खाना ठीकसँग डाइजेष्ट हुन पाउँदैंन्, जसले ग्याष्ट्रिक जन्माउँछ ।
४. लगातार बसिरहनु
कयौ घण्टासम्म लगातार बसेर काम गर्नाले पनि खाना राम्रोसँग पच्न पाउँदैंन् । यसले पेटमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्याँस उत्पन्न हुन्छ र ग्याष्ट्रिकको समस्या देखा पर्छ ।
५. धेरै मिठो खाना
धेरै मिठो हुने खाने कुराहरु जस्तो कुकिज, चिनी, मिठाइजस्ता खानेकुरा खानाले पनि ग्याष्ट्रिकको समस्या हुन थाल्छ ।
६. चिसो पेय पदार्थ
सोडा र चिसो पेय पदार्थमा कार्बनडाइअक्साइड बबल्स हुन्छ, जो पेटमा गएर ग्याँस उत्पन्न गर्ने काम गर्छ । यस्ता चिसो पेय पदार्थ पिउनाले पनि ग्याष्ट्रिक हुन्छ ।
७. तेलमा पकाइएको खाना
तेलमा तारिएको खानेकुरा जस्तो समोसा, भुजियाजस्ता खानेकुराहरुमा चिल्लोको मात्रा धेरै हुन्छ । यस्ता खानाहरु खादा पाचन प्रक्रिया सहज रुपमा हुँदैंन् । जसका कारण पेटमा ग्याष्ट्रिकको समस्या देखा पर्छ ।
वियर, रक्सी र वाइनमा एसिड मात्रा रहेको हुन्छ । यस्ता पेय पदार्थ बढी मात्रामा सेवन गर्नाले ग्याष्ट्रिक हुन्छ ।
क्रुर शासक गद्धाफी सरकारले जनतालाई दिएको थियो यस्ता आश्चर्य लाग्दा सुविधाहरु
एजेन्सी–लिबियाका पुर्व शासक जनरल मुअम्मर गद्धाफीको अन्त भएको ५ वर्ष बितिसकेको छ । तर, आज पनि उनको चर्चा हुने गरेको छ ।